पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर झुन्ड्याइयो, निर्मला पन्तको च्यातियो
२०७५ मंसिर १६ आइतबार ०६:५२:००
बितेको साता सरकारले तामझामका साथ ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भएको घोषणा गर्यो । प्रधानमन्त्रीको तस्बिरसहितको प्रचार गरेर सरकारले नयाँ युग सुरु भएको घोषणा गरेको थियो । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपालले पत्रपत्रिका र अनलाइनमा गरेको विज्ञापनको चौतर्फी आलोचना भयो । त्यतिमात्रै होइन, होर्डिङ बोर्डमा रोक लगाएको सरकारले काठमाडौंका बिजुलीका पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर झुन्ड्यायो । जहाँ लेखिएको थियो – नयाँ युगको सुरुवात ।
संगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा योजना आफैंमा राम्रो कामको आरम्भ भए पनि यसका चुनौती र प्रचारले यसलाई भद्दा बनाइदिएको विश्लेषण यो साता दैनिक पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा भयो ।
यो साता सबैजसो दैनिक पत्रिकाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकाशपछि आजीवन निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सनको व्यवस्थासहित सरकारले योगदानमा आधारित सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरे ।
नागरिक दैनिकले भने साढे १ खर्ब रुपैयाँको चुनौती रहेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । नागरिक दैनिकले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न समाचारमार्फत गरेको छ – यति ठूलो कार्यक्रमका लागि सरकारको पूर्वतयारी के छ ? कार्यक्रम लागु भएपछि आउने समस्याबारे सरकार जानकार छ ? लाखौं मजदुर कर्मचारीका लागि अति आवश्यक र लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेर सफल बनाउन सरकार सक्षम छ ? वा सिन्डिकेटको जात्राजस्तै हो ?
के हो त सामाजिक सुरक्षा योजना ?
यो साता नयाँ पत्रिका दैनिकले सामाजिक सुरक्षा योजना के हो ? भन्ने बारेमा विस्तारमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार मिलेर कोष बनाउने र पेन्सन दिने अनिवार्य योजना भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
निर्मलाको पोस्टर टाँस्दा पक्राउ
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको कार्यक्रमको यति तामझामसाथ प्रचार गरियो तर न्याय माग्दै बिजुलीका पोलमा टाँसिएको तस्बिर भने प्रहरी लगाएर हटाइयो । त्यतिमात्र हैन, काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न भागमा टाँसिएका निर्मला पन्तका तस्बिर सरकारले जबर्जस्ती हटायो । प्रहरीले पोस्टर टाँस्ने युवालाई पक्राउ गरियो ।
‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ लेखिएको पोस्टर टाँस्दा शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघरबाट १२ जना युवालाई नियन्त्रणमा लिएर बेलुकी मात्रै छाडिएको थियो । शनिबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले यस विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् ।
विवादास्पद आइएनजीओको कार्यक्रम
यो साता ‘विवादास्पद आइएनजीओ’ ले गरेको कार्यक्रमको पनि उत्तिकै चर्चा भयो । एसिया प्यासिफिक समिटमा युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यसहित १५ सय उच्च पदस्थ नेपाली दम्पतीलाई आशीर्वाद दिने तयारी गरेको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ । तर यस कार्यक्रमलाई नागरिक दैनिकले भने समर्थन गरेको देखिन्छ ।
यो समिट आइतबारसम्म चल्ने बताइएको छ । समिटले इसाई धर्मको प्रचार गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
निर्मला पन्तका बुबा काठमाडौंमा भर्ना
कञ्चनपुरमा साउन दोस्रो साता बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका बुबा यज्ञराज पन्त बिरामी परेपछि उनलाई काठमाडौंको अस्पताल भर्ना गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनलाई भर्ना गरिएको हो । छोरीलाई बलात्कार र हत्या गर्नेलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै धर्नामा बस्दा उनी बिरामी परेका थिए ।
वाइडबडीको ‘वाइड’ कथा
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले नेपाल एयरलाइन्सले ल्याएका दुवै वाइडबडी विमानका सम्बन्धमा लगातार ‘स्टोरी’ प्रकाशित गरेको छ । अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचारअनुसार विमान खरिदमा ठूलै घोटाला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसका त्रुटि औंल्याएको छ ।
पोस्टमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ – नेपाल एयरलाइन्सले हाई फ्लाईसँगै ती जहाज किनेको दाबी गर्दै आएको छ । उसले भने ती जहाजलाई ‘आफ्नो’ भनिरहेको छ । बेचिसकेकालाई कसैले ‘मेरो’ भन्दैन ।” उता नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा भने ‘वाइडबडीको स्वामित्व निगमकै, दुई जहाजको भन्सार मात्रै २५ करोड’ तिरिएको भन्दै उल्लेख छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले भने यतिधेरै प्रश्न उठ्दा पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नसकेको छैन । यस विषयमा संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।